Ayyaanni Hundeffamma Waggaa Lammaffaa OMN Magaala Barganitti Kabajame – YEROOBLOG
Ayyaanni Hundeffamma Waggaa Lammaffaa OMN Magaala Barganitti Kabajame
Yerooblog	News & Views, Oromia &Ethiopia, Oromo Protests	 April 11, 2016 2 Minutes
Ayyaanni waggaa lammaffaa hundeeffama Oromia Media Network (OMN) gaafa Bitootessa 10, 2016 biyya Noorweey, magaala Barganitti kabajamee ooleera. Hawaasni Oromoo magaala Bargan kabaja ayyaana OMN kanarratti baay’inaan argamaniiru. Bakka buutonni hawaasa Oromoo magaala Haaguusendi karaa dheera deemanii dhufuudhaan qaama kabaja ayyaanichaa ta’uu danda’aniiru.
Ayyaanichis qophiilee garaagaraatiin kabajamee oleera. Qindeesitoonni kabaja ayyaanicharratti haasawaa taasisaniin OMN gurraa fi ija uummata Oromoo ta’uu dubbataniiru. Erga OMN hundeefamee uummanni Oromoo kan biyya keessaa fi ka biyya alaa jiru haala uummanni Oromoo irra jiru (siyaasa, dinagdee, seenaa, aadaa fi hawwaasummaa)ilaalchisee odeeffanooo gahaa ta’e argachuu danda’eera jedhaniiru. Akkasumas, fincila diddaa gabrummaa uummanni Oromoo gaggeessa jiru fi tarkaanfii sukkanneessaa mootummaan abbaa irree wayyaanee ummata irraan gahaa jiru addunyaatti akka dhagahamu gochuu keessatti hojii olaanaa dalagaa akk jirus himameera. Kana malees, OMN yeroo kamiyyuu caalaa uummatni Oromoo walitti fiduudhaan shoora guddaa taphaateera jedhameera. Kanaaf, OMN daran cimee uummata Oromoo akka tajaajilu gochuuf dinagdeetiin Oromoonni diyaaspoora hamma humna isaanii waan qaban gumaachuun barbaachisaa akka ta’es eerameera.
Sagantaa kanarratti Itti Gaafatamaan (Daayirektarri) OMN, Obbo Jawaar Mohammed argamuudhaan haasa’aa dhimmaa qabsoo Oromiyaa keessatti finiinaa jiruu fi waa’ee OMN ilaalchisee dubbi godhaniiru. Akka isaan dubbatanitti uummanni Oromoo yeroo kamiyyuu caala tokkoomee mootummaa wayyaanee qabeenya isaa saamee fi mirga isaa sarbee waggoota hedduudhaaf isa gidirsaa ture irratti ka’ee jiraa; injifannoo boonsaa ta’es ji’oota shanan darban keessatti galmeesisee jira. Itti dabaluunis akka jedhanitti qabsoon Oromoo kana caalaa jabaatee mootummaa abbaa irree kana ofirraa kaasuu qaba; kun yoo ta’e malee Oromoon nagaa argachuu hindanda’u. Akkasumas dhaabilleen uummata Oromoo bakka bu’uudhaan hojjechaa jiran yeroo kamiyyuu caala amma walitti dhufuudhaan kaayyoo uummata Oromoof waliin hojjechuun isaan barbaachisadha; kanaaf kanarratti hojechuun dirqama dha jedhaniiru Obbo Jawaar
Obbo Jawaar akka dubbatanitti OMN yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti daawwatamaa hinjiruu. Kunis kan ta’eefi mootummaan wayyaanee OMN Oromiyaa keessatti akka hintamsaafamne ukkamsaa jiraa. Kanaan dura si’a sagaliif teknoolojii biyya Chaayinaa fayyadamuun tamsaasa OMN ukkaamsaa turaniiru. Haata’u malee yeroo salganuu OMN deebi’ee qilleensarra ooluu danda’eera. Boodarra gaafa OMN tamsaasa saatalaayitii ukkamsamuu hindandeenye kaampanii biyya Faransaay irra kireefatee fayyadauu gaafa jalqabu mootummaa wayyaanee kara siyaasa (karaa dipiloomaasiitiin)OMN qilleensa irraa akka bu’u godhame jedhani. kana irra aanuudhaaf yeroo amma kanatti hooggatoonni OMN socchii cimaa godhaa akka jiraanii fi yeroo dhiyoo keessatti OMN qilleensa Oromiyaa irratti akka deebi’u danda’u dubbtaniiru.
Saganticha irratti haawasni Oromoo magaala Barganii fi Haawugesuundi gargaarsa maallaqaa OMN tiif taasisaniiru. Wallistoonni Oromoo kan akka Hirphaa Gaanfuree, Ilfinesha Qannoo, Lelisee Lameessaa fi kanneen biroon saganticha irratti argamuun uummata buuhaarsaniiru.
Previous Post OROMOO BARAARUUF WAYYAANEE GAGGABSUUN BARBAACHISAADHA
Next Post BLOODSHED IN GAMBELLA: Shades of an Inside Job
One thought on “Ayyaanni Hundeffamma Waggaa Lammaffaa OMN Magaala Barganitti Kabajame”
Abdoo Sabaa says:
Abdoo Saba Facebook